अरुणिमा भन्छिन्–सुत्केरी भएको ६ महिनापछि सेक्स – Bisal Chautari
अरुणिमा भन्छिन्–सुत्केरी भएको ६ महिनापछि सेक्स
- २७ बैशाख २०७१, शनिबार १७:२९ मा प्रकाशित
arunima lamsal new photo
अभिनेत्रीको रपमा स्थापित भइरहेकै बेला अरुणिमा लम्साल अमित अर्यालसँग विवाह बन्धनमा बाँधिइन् । साँढे दुई वर्ष पहिले उनीहरुले आफ्नो मायाको चिनो संसारलाई छोरी अक्षता अर्याललाई जन्म दिए । अभिनेत्रीबाट आमा सेलिब्रेटी भएपछि अरुणिमाले के–कस्तो अनुभव गरिन् ? प्रस्तुत छ, आमा अनुभवबारे विश्वास खड्काथोकीले अरुणिमासँग गरेको कुराकानी:
एउटी अभिनेत्रीले आमा बन्नु ठीक रहेछ कि बेठिक?
कतिलाई आमा नबन्दै ठीक जस्तो लाग्दो हो । तर आमा बन्दाको खुसीको क्षण अर्कै छ। मलाई लाग्छ यो क्षण संसारभरिकै सबैभन्दा खुसीको क्षण हो। आमा बनेकोमा मैले कहिल्यै रिग्रेट फिल गरेकी छैन ।
छैन, छैन। श्रीमान्लाई पनि छोरीकै रहर थियो किनकि श्रीमान्को घरमा छोरीहर नै हुनुहुन्न। त्यसैले सबैतिरबाट छोरीकै चाहना थियो। पुरै परिवारलाई नै छोरी भइदिएहुन्थ्यो भन्ने थियो।
तपाइं र्आमा नबन्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो कि आमा भएपछि बढी खुसी हुनुहुन्छ?
बच्चाँजन्मिएपछि रोयो। त्यतिबेला मलाई सिरिङग भएको थियो। अनि मैले सोधिहालें छोरा कि छेरी भनेर? जबकि पहिले चेकअप गराउँदा नै मेरो पेटभित्र छोरी छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ। तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुँदैन भन्ने थियो। गर्भ चेक गराउँदा छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि निकै खुसी भएको थिएँ। जन्मेपछि पनि छोरी नै हो भन्ने पक्का हुँदा पनि खुसी लाग्यो।
जहाँ जाँदा पनि जसले खै बच्चाँभनेर सोध्छन्। सबैलाई बच्चाँहेर्न रहर लाग्दो रहेछ। तर मेरो बच्चाँमसँग बाहेक अरसँग रहन मान्दै मान्दैन।
फुल टाइम नै छोरीलाई दिन्छु। अहिले त छोरी पनि स्कुल जान थालिसकेकी छ। अहिले नर्सरीमा पुगेकी छ। नाच्छे, राष्ट्िरय गीत, गायत्री मन्त्रसमेत गाउँछे।
तपाईंकी छोरीलाई तपाइं र्कलाकार हो भन्नेचाहिँ थाहा छ कि छैन?
खै त्यो त थाहा छैन होला। टिभीमा देखेपछि आमा तपाइं किर्न रोएको भनेर भन्छे। म सँगसँगै अभिनय गरेको हिरोहरुलाई देख्दा मम्मी त्यो अंकल को हो भनेरचाहिँ सोध्छे।
छोरीले कत्तिको दु:ख दिन्छिन् नि?
दु:ख त दिइहाल्छ नि। आमा भन्दै रोइरहन्छे।
छोरी त खुब रुनुहुँदो रहेछ। छोरीले दु:ख दिँदा तपाइं र्त रुनुभएको छैन?
छोरीले दिएको दु:खले त रोएको छैन। तर ऊ बिरामी हुँदा भने रोएकी छु। छोरीलाई खोकी लाग्ने, घाँटी कराउने भइरहेको थियो। त्यतिबेला एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने रहेछ। हस्पिटलमा ४ ? ५ जना सिस्टरहरुले छोरीलाई हात खुट्टा समातेर नसामा घोच्नुभएको थियो। मलाई बाहिर राखिएको थियो। छोरी आमा भन्दै रोइरहेकी थिई। बाहिर म पनि खुब रोएकी थिएँ।
तुलनात्मक रपमा फिल्ममा जम्न गाह्रो छ। आफ्नो सन्तान त जसो तसो हुकिर्हाल्छ। तर फिल्ममा जम्न त धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। राम्रो गर्नुपर्दछ।
लाग्थ्यो, बच्चाँपेटमा हुँदा पनि फिल्ममा खेलूँ खेलूँ जस्तो लाग्थ्यो। टिभीमा आएको रिपोर्टहरु हेर्दा फिल्म कहिले गरँ जस्तो लाग्दथ्यो।
गर्यो नि। त्यो मेरो पिक टाइम थियो। त्यतिखेर मेरो ब्रेक भएपछि अरले चान्स पाइहाले। तर केही पाउनका लागि केही त गुमाउनुपर्छ।
तत्काल सोच त छैन। तर दुईवटा बच्चाचाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। तत्काल भने जन्माउँदिनँ। ५ ? ६ वर्षको फरक हुनुपर्दछ।
केही सोच छैन। हुर्काउने हो, शिक्षा–दीक्षा, संस्कार दिने हो। हामीले बनाएर बन्ने होइन, अहिलेका बच्चाहर। उनीहरकै चाहनाअनुसार अघि बढ्छन्।
आफू आमा बनिसक्नुभयो, तपाइंर्को विचारमा आमा भनेको के रहेछ?
आमा भनेको जननी नै हो। आमाले जन्म दिएर संसार देखाउँछिन्। त्यसपछि आँखा खुलाउने काम भगवान्ले गर्छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट साभार